Vono olona :: Vehivavy teôlôjianina, 70 taona, maty nisy nanolana • AoRaha
Misaona ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM). Renim-pianakaviana, 70 taona, no namoy ny ainy nisy namono, tamin’ny alahady teo, teny Ambohibao. Ralivao Helène, izay mpiaro ny zon’olombelona sady teôlôjianina voalohany tao amin’ny FLM, ity niharan’ny hetraketraky ny olon-dratsy ity.
Io tranga io no nanairan’ny fiangonana, izay sady miteny amin’ny anaran’ny Fiombonan’ny fiangonana kristianina eto Madagasikara (FFKM) ny fitondram-panjakana manoloana ny firongatry ny tsy fandriampahalemana, teny Isoraka, omaly.
“Feno habibiana ny famonoana satria mbola hita teo amin’ny tendany ny dian-tady no tsikaritra fa niharan’ny fanolanana izy”, hoy ny filohan’ny FLM, ny pastora Rakotonirina David.
Naneho ny alahelony ity farany. “Efa tafahoatra ny tsy fandriampahalemana. Tsy mba matin’ny aretina akory Ralivao Helène fa maty novonoin’ny jiolahy raha iny izy namonjy fodiana iny”, hoy izy raha nitafa tamin’ny mpanao gazety, omaly.
Mpikambana mafana fo tao amin’ny fiangonana nandritra ny taona maro ity renim-pianakaviana ity. Teôlôjianina sy mpandika teny amin’ireo misionera norveziana, izy fony fahavelony. Namonjy fodiana izy rehefa avy namita ny asa aman-draharaha fanaony tao am-piangonana, teny Ambohibao, tamin’ny alahady antoandro teo. Tsy tratra antso tamin’ny findainy intsony anefa izy, taorian’ny tamin’ny 1 ora antoandro.
Nanomboka nikoropaka ny fianakaviany satria tsy fanaony ny tara fodiana. Tsy mifanalavitra rahateo ny tranony sy ny fiangonana saingy mandalo toerana mangina sy mamakivaky fasana. “Efa natao avokoa ny fikarohana rehetra, hatrany amin’ny hopitaly. Nampandrenesina ny mpitandro filaminana. Tsy nisy vokany. Efa tamin’ny 1 ora maraina no nisy antso nampandre fa hita ny nofo mangatsiakan-dRalivao Helène”, hoy hatrany ny pastora Rakotonirina David. “Teo an-tokontanim-pasana no hitan’ny zandary teo amin’ilay toerana antsoina hoe Ambohijanaka ny vatana mihoson-drà. Tsy teny aminy intsony ny poketrany sy ny peratra”, hoy hatrany ity mpitandrina ity.
Nanao antso avo amin’ny fanjakana, araka izany, ny FFKM mba hanamafisana ny fitandroana ny ain’ny vahoaka sy ny fananany ary hanenjika an’izay nahavanon-doza. Efa nanangana rafitra hiadiana amin’ny tsy fandriampahalemana ny tompon’andraikitra.
Nampahafantarina ampahibemaso vao tsy ela akory izay ny fisian’ny sampana miady amin’ny fakàna an-keriny. Miara-misalahy avokoa ny mpitsara sy ny polisy ary ny zandary. Andrasana kosa ny fanenjehana ny jiolahy any an’elankelan-trano. Antoka iray hahafahan’ny rehetra miaina am-pilaminana ny fisian’ny fandriampahalemana eny ifotony.
Hafahafa ihany raha izao tranga izao azo heverina ho asan-jiolahy tokoa ve sa mety misy ambadika ihany satria dia mbola andro atoandro koa no nisehoan’ny loza. Efa mandray ny andraikiny feno ny mpitandro filaminana ary vonona tokoa ny fitondram-panjakana @ fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ka tokony samy mandray ny andraiky ihany koa ny vahoaka fa indrindra moa ny mpitondra fivavahana
Ankadindratombo :: Lehilahy, 25 taona, maty voatsindron’ antsy
Lozam-pifamoivoizana :: Mpamily sy vehivavy iray niara-maty voatsindry tao anaty fiara